फेसबुक भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् ➵ भिडियो पृष्ठहरू, थम्बनेलहरू, gif छविहरू, फेसबुक पृष्ठहरू, समूहहरू, कथाहरू, प्रोफाइल, टिप्पणी, कभरबाट फोटोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
तपाईं पुरानो संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो संस्करण स्थापना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 3.0.2
❝फेसबुकबाट भिडियो र फोटोहरू बचत गर्न निःशुल्क उपकरण।❞
➶ भिडियो पृष्ठहरू, थम्बनेलहरू, gif छविहरू, फेसबुक पृष्ठहरू, समूहहरू, कथाहरू, प्रोफाइल, टिप्पणी, कभरबाट फोटोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
यहाँ हामी फेसबुक भिडियो डाउनलोड गर्न छिटो र सित्तै तरीका साझेदारी गर्नेछौं। केवल फेसबुक भिडियो URL टाँस्नुहोस् र फेसबुकबाट भिडियो बचत गर्न डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्।
फेसबुक डाउनलोडर क्रोम / फायरफक्स
फेसबुक डाउनलोडर विस्तारले तपाईंलाई MP4 मा उत्कृष्ट भिडियोमा फेसबुक भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
कसरी फेसबुक भिडियोहरू बचत गर्ने
हाम्रो नि: शुल्क फेसबुक भिडियो डाउनलोडरले केहि चरणहरूको साथ फेसबुकबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न धेरै सजिलो बनाउँदछ। कसरी सुरू गर्ने भन्ने बारे यहाँ छ:
भिडियोमा दायाँ क्लिक गरेर र प्रतिलिपि चयन गरेर फेसबुक भिडियो युआरएल प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
माथी इनपुट फिल्डमा फेसबुक लिंक टाँस्नुहोस् र कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस्।
हाम्रो फेसबुक भिडियो डाउनलोडरले उच्च गुणस्तरको MP4 भिडियो लिract्कहरू निकाल्छ, र तपाईंले चाहेको कुनै पनि गुणस्तर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
क्रोम एक्स्टेन्सन र फायरफक्स एड-अनको साथ कसरी फेसबुक भिडियो डाउनलोड गर्ने
फेसबुकबाट भिडियो बचत गर्न सबै भन्दा राम्रो फेसबुक डाउनलोडर प्रयोग गर्न अर्को ट्यूटोरियल अनुसरण गर्नुहोस्। आउनुहोस्!
फेसबुक वेबसाइट खोल्नुहोस्।
फेसबुकमा भिडियो प्ले गर्नुहोस्।
फेसबुक भिडियो डाउनलोडर क्रोम / फायरफक्स खोल्नुहोस् ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
नयाँ ट्याबमा, फाईल स्वत: डाउनलोड हुनेछ र तपाईंको उपकरणमा बचत हुनेछ।
अफलाइन फेसबुक भिडियोहरू बचत गर्ने कारणहरू।
त्यसैले तपाईं यसलाई अन्य सामाजिक मिडिया साइटहरूसँग साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ।
यसलाई तपाईंको कम्प्युटरमा भण्डारण गर्न विशेष गरी तपाईंको आफ्नै भिडियोहरू जगेडाको रूपमा।
भविष्यमा सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्न।
भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्न यदि यो लामो छ र तपाईंसँग पर्याप्त समय छैन।
☀ फेसबुक उपशीर्षकहरू (बन्द क्याप्शन) डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ Mp4 मा फेसबुक भिडियो रूपान्तरण।
☀ फेसबुकबाट अल्ट्रा एचडी १40p०p, पूर्ण HD 1080p भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक अडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक थम्बनेल डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक gif छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक टिप्पणी भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ साझेदारी गरिएको फेसबुक भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक कभर भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक सार्वजनिक समूह भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक गोप्य समूह भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक प्रोफाइल भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुकमा निजी भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ हेर्ने पृष्ठमा फेसबुक भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ कहानी पृष्ठमा फेसबुक भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ वाच पार्टीमा फेसबुक भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक बल्क डाउनलोडर।
☀ फेसबुक एम्बेडेड भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक लाइभ भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक degree 360० डिग्री फोटोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ फेसबुक थ्रीडी फोटो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ HD गुणवत्ता मा फेसबुक प्रोफाइल तस्वीर हेर्नुहोस्।
☀ फेसबुक भिडियोलाई एमपी to मा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
फेसबुक प्लेटफर्म फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नै प्लेटफर्ममा भिडियोहरू हेर्न अनुमति दिनको लागि मात्र डिजाइन गरिएको हो। यद्यपि धेरै प्रयोगकर्ताहरूले फेसबुक भिडियोहरू डाउनलोड गर्न र उनीहरूको स्मार्टफोनहरू वा पीसीहरूमा बचत गर्नु आवश्यक छ, जसले तिनीहरूलाई इन्टरनेटमा जडान नगरीकन हेर्न सक्दछन्। त्यसकारण, हामीले यो उपकरणहरू सिर्जना गरेका छौं जुन सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको मनपर्ने भिडियोहरू डाउनलोड गर्न र बचत गर्न अनुमति दिन्छ।
फेसबुकको लागि भिडियो डाउनलोडर
फेसबुकबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् - हाम्रो अनलाइन फेसबुक डाउनलोडरले तपाईंलाई कुनै पनि सार्वजनिक फेसबुक भिडियो उच्च गुणवत्ताको वा कम गुणवत्ताको MP4 ढाँचामा बचत गर्न अनुमति दिनेछ।
फेसबुक gif डाउनलोडर
फेसबुकबाट gif छवि डाउनलोड गर्नुहोस्। भिडियो ढाँचाको रूपमा बचत गर्नुहोस्।
फेसबुक उपशीर्षक डाउनलोडर
फेसबुकबाट बन्द क्याप्शन URL निकाल्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्।
HD मा फेसबुक भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
फेसबुक भिडियो डाउनलोडरले एसडी भिडियो मात्र समर्थन गर्दैन, तर HD MP4 ढाँचामा भिडियोहरू डाउनलोड गर्दछ। यदि भिडियो एक उच्च परिभाषा भिडियो हो भने, तपाईं यसलाई कुनै गुणवत्ता खटाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, p२०p, १p०p, १4040० पी ठीक छन्।
लिंक द्वारा फेसबुक भिडियो डाउनलोडर
फेसबुक भिडियो डाउनलोडर एक वेब अनुप्रयोग हो जुन डाउनलोड गर्न र भिडियो लिंक प्रयोग गरेर मनपर्ने फेसबुक भिडियोहरू अनलाइन बचत गर्न मद्दत गर्दछ। URL बाट छिटो HD बाट भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो, यो उपकरण प्रयोग गर्न को लागी स्वतन्त्र छ, १००% सुरक्षित र सुरक्षित छ, र कुनै सीमितता बिना तेज गति मा धमिलो मा भिडियो डाउनलोड गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
फेसबुक डाउनलोडर गुगल क्रोम, फायरफक्स, आईई, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसफ्ट एज, यूसी ब्राउजर र कुनै पनि वेब ब्राउजरमा राम्रोसँग काम गर्दछ। थप रूपमा, यो म्याक अपरेटिंग प्रणालीसँग अत्यधिक उपयुक्त छ।
यहाँ तपाईंको प्रश्न र उत्तरहरू फेला पार्नुहोस् - तपाईं कसरी फेसबुक भिडियो बचत गर्नुहुन्छ?
+ फेसबुक भिडियो डाउनलोडर भनेको के हो?
फेसबुक भिडियो डाउनलोडर एक नि: शुल्क उपकरण हो जुन तपाईंलाई अफलाईन प्लेब्याकको लागि फेसबुकबाट कुनै पनि भिडियोहरू नि: शुल्क डाउनलोड गर्न मद्दत गर्ने क्षमता राख्ने उपकरण हो।
+ के म लाइभ फेसबुक भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छु?
एक पटक स्ट्रिमिंग सकिएपछि, तपाईं सजिलैसँग फेसबुक डाउनलोडर क्रोम एक्स्टेन्सन प्रयोग गरेर तपाईंको उपकरणमा प्रत्यक्ष FB भिडियोहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
+ के फेसबुक डाउनलोडरले डाउनलोड गरिएका भिडियोहरू भण्डार गर्दछ वा भिडियोहरूको प्रतिलिपि राख्छ?
हामी भिडियोहरू भण्डार गर्दैनौं। न त हामी डाउनलोड गरिएका भिडियोहरूको प्रतिलिपि राख्दछौं। सबै भिडियोहरू फेसबुक सर्वरमा होस्ट गरिएका छन्। साथै, हामी हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूका डाउनलोड ईतिहासहरूको ट्र्याक राख्दैनौं।
+ म किन फेसबुक भिडियो डाउनलोड मा त्रुटि भइरहेको छ?
केहि भिडियोहरू निजी हुन्, र लगईन बिना पहुँच योग्य छैनन्। ती भिडियोहरूको लागि तपाईं हाम्रो फेसबुक निजी भिडियो डाउनलोडर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
➶ म कसरी फेसबुकबाट निजी भिडियो डाउनलोड गर्ने?
+ डाउनलोड गरिएको फेसबुक भिडियोको ढाँचा के हो?
फेसबुक भिडियोको उपलब्ध गुणस्तरमा निर्भर गर्दै, हाम्रो फेसबुक भिडियो डाउनलोडरले १4040०p, 1080p, HD क्वालिटी र एसडी गुणस्तर भिडियो लिंकहरू निकाल्छ। तपाईले चाहानु भएको डाउनलोड गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, केहि केसहरूमा, भिडियोको गुणस्तर कमजोर छ र मात्र उपलब्ध भिडियो एसडी गुणस्तरको हो।
+ फेसबुक मेसेन्जरबाट भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने?
हो, तपाईं बिल्कुल सक्नुहुन्छ। कुराकानी को लागी स्क्रोल गर्नुहोस् जब सम्म तपाई आफ्नो व्यक्तिगत भिडियो पाउन सक्नुहुन्न जुन तपाई सुरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ। यो एक भिडियो हुनुपर्दछ जुन तपाईं वा अरू कसैले कुराकानीमा लिइएको हो। भिडियो ट्याप गरी समाउनु पर्दाको तल देखिने मेनू प्रोम्प्ट गर्दछ। भिडियो बचत गर्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस् र भिडियो तपाईंको फोनको फोटो वा ग्यालरी अनुप्रयोगमा डाउनलोड हुनेछ। पीसीको लागि मेसेन्जरमा, तपाइँलाई सबै कुरा चाहिन्छ ठूलो स्क्रिनमा भिडियो प्ले गर्नुपर्दछ, बाँया कुनामा एउटा डाउनलोड बटन छ, तपाइँको मेसेन्जर भिडियो तुरून्त कब्जा गर्न यसलाई क्लिक गर्नुहोस्।
+ मेरो एन्ड्रोइड फोनमा फेसबुक भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने?
फेसबुक भिडियो डाउनलोडर एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि फायरफक्समा पहिले नै उपलब्ध छ। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
➶ कसरी फेसबुक भिडियो लिंक प्रतिलिपि गर्ने
+ कुन भिडियो गुणवत्ता समर्थित छ?
फेसबुक डाउनलोडरले सबै भन्दा राम्रो गुणको साथ सबै MP4 लिंकहरू निकाल्न सक्छ। समर्थन गुणवत्ता 1440p UHD, 1080p FHD, 720p HD।
+ आईफोनमा फेसबुक भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने?
तपाईंको आईफोनमा फेसबुक अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र तपाईं डाउनलोड गर्न चाहानु भएको भिडियोमा जानुहोस्। तल दायाँ कुनामा अवस्थित साझेदारी बटनमा ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रतिलिपि लिंक थिच्नुहोस्। यस वेबसाइट खोल्नुहोस्, भिडियोको लिंकलाई खोजी बाकसमा पेस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि डाउनलोड बटन थिच्नुहोस्।
+ कसरी फेसबुक अडियो सन्देश डाउनलोड गर्ने? म कसरी भ्वाइस सन्देशहरू बचत गर्न सक्छु?
कुराकानी को लागी स्क्रोल गर्नुहोस् तपाईले व्यक्तिगत अडियो फेला पार्नुभयो जुन तपाईं बचत गर्न चाहानुहुन्छ। अडियो ट्याप गरेर होल्ड गर्दा स्क्रिनको तल देखा पर्नेछ। ट्याप सेव अडियो र अडियो तपाईंको फोनको फोटो वा ग्यालरी अनुप्रयोग मा डाउनलोड हुनेछ। पीसीको लागि मेसेन्जरमा, तपाईंलाई सबै अडियो प्ले गर्न आवश्यक पर्दछ, बायाँ कुनामा त्यहाँ डाउनलोड बटन छ, तपाईंको मेसेन्जर अडियो तुरून्त कब्जा गर्न यसलाई क्लिक गर्नुहोस्।
+ म कसरी फेसबुक ईतिहास भिडियो डाउनलोड गर्ने? म कसरी फेसबुक बचत बचत गर्न सक्दछु?
बचत गरिएको मेनू वा फेसबुकमा गतिविधि लग क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंले डाउनलोड गर्न चाहानुभएको भिडियो प्ले गर्नुहोस्। डाउनलोड लिंक हडप्न क्रोम एक्सटेन्सनहरू वा फायरफक्स एडन खोल्नुहोस्।
फेसबुक भिडियो अनलाइन पूर्ण HD डाउनलोड गर्नुहोस्
9 प्रयोगकर्ताहरूले मूल्या .्कन गरे
फेसबुक भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई फेसबुकबाट तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइलमा सफ्टवेयरको बिना नि: शुल्क बचत गर्नुहोस्।
सर्वश्रेष्ठ गुणस्तर र उच्च डाउनलोड गतिमा फेसबुक भिडियोहरू बचत गर्न नि: शुल्क फेसबुक डाउनलोडर।
MP4 मा सजिलैसँग राम्रो गुणको साथ फेसबुक भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
तपाईंको उत्तम भिडियो डाउनलोडर, भाइरस बिना १००% सुरक्षित, पूर्ण नि: शुल्क सेवा।
MP4 मा उत्तम ढाँचामा सजीलो र द्रुत फेसबुक भिडियोहरू डाउनलोड गर्न निःशुल्क फेसबुक डाउनलोडर। कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना प्रयोग गर्न स्वतन्त्र।
अनलाइन सेवाले मलाई फेसबुक भिडियो निःशुल्क डाउनलोड गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यो वास्तवमै उपयोगी छ! मैले यस साइटलाई पहिले नै बुकमार्क गरेको छु।
❤ यस अनलाइन अनुप्रयोगलाई धन्यवाद, म सजिलै फेसबुक भिडियोहरू मेरो कम्प्युटर र आईफोनमा सुरक्षित गर्न सक्दछु।
वेबसाइट अत्यधिक अनुकूलित र मोबाइल मैत्री छ। तपाइँ यस वेबसाइटलाई तपाइँको मोबाईलमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि समय र कहिँ पनि भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
फेसबुक भिडियो डाउनलोडर अनलाइन - FB भिडियो डाउनलोड गर्न उत्तम नि: शुल्क अनलाइन उपकरण 2021
QR कोड findmyfbid getfvid getfbstuff bitdownloader fbdown saveas downloadvideosfrom